Nhau - Zvikonzero uye mhinduro dzekutsauka kweanorwisa-ngura fan fan kuyerera
Kuyerera kutsauka kweanodzivirira-ngura fan inokonzeresa kutsauka kwegasi rinoburitswa, iro rinozokanganisa zvakanyanya kushanda kweiyo fan. Ndeipi chikonzero uye maitiro ekugadzirisa icho? Zvikonzero uye mhinduro dzekutsauka kweyean-corrosion fan kuyerera chiyero:
1. Zvikonzero zvekutsauka kwekuyerera rate:
(1) Zvinogona kunge iko kuti kukosha chaiko kwepombi network kuramba kwakasiyana zvakanyanya kubva kune yakatarwa kukosha. Kana iyo chaiyo kukosha kweiyo pombi network inoratidzira coefficient K iri pasi peiyo yakatarwa kukosha, kuyerera kunowedzera, uye kana iyo chaiyo kukosha kweK iri yakakura kupfuura iyo yakaverengerwa kukosha, kuyerera kuchaderera.
(2) Pakusarudza feni, simba rekutsauka kwakazara kweanorwisa-ngura fan haanyatso kutariswa. Kana iko kumwe kumanikidza kuri kutsauka kwakanaka, kuyerera kuchizowedzera, uye kana iko kumanikidzwa kwakazara iko kutsauka kwakashata, kuyerera kwacho kuchaderera.
Chechipiri, mhinduro yekutsauka kweyean-corrosion fan kuyerera:
(1) Tsiva iyo anti-ngura fan ine yepamusoro kana yakaderera kumanikidza.
(2) Simbisa kuyerera kwekuyerera uye shandisa chigumbuso kugadziridza kuyerera, sekugadzirisa vharuvhu yemhepo uye musuwo wekugadzirisa.
(3) Chinja iyo yekumhanyisa kumhanyisa yeiyo anti-ngura fan.
(4) Chinja kuramba kweiyo pombi network uye gadzirisa kuyerera kuti kuyerera kuitike zvakanyanya kune zvinodiwa nebasa.
Izvi zviri pamusoro ndizvo zvikonzero uye mhinduro dzekutsauka kweanorwisa-ngura fan fan kuyerera. Kana dambudziko rikaitika, unogona kutarisa mapoinzi ari pamusoro uye kutora matanho anoenderana mushure mekuwana chikonzero chekudzivirira kutsauka kwe fan kubva mukukanganisa mashandiro ebasa.
Post nguva: Sep-20-2019
Centrifugal mutsinga dzinofamba nemukaka Fan, Imwe Inlet Centrifugal Fan, Fume Kukwesha, Yakakwira Pressure Centrifugal Fan, Pedza Fani, Radial Nereza Centrifugal Fan,